Warqad Cilmi Baaris ah oo ku jirta Somalia
Ma u baahan tahay caawimaad qoris xirfadeed? Ka hel warqad tayo sare leh Waraaqda Cilmi-baarista Caadiga ah ee ugu wanaagsan Somalia ku qoran dhammaan heerarka tacliimeed.
Haddii aad rabto inaad hesho 100% waraaqaha asalka ah ee qiimaha la awoodi karo, ka dib noogu tiirsan. Waxaa la joogaa waqtigii lagu kobcin lahaa guushaada waxbarasho iyada oo la adeegsanayo adeegga qorista warqadda cilmi-baarista ee mudnaanta leh Somalia
Sida Loogu Xulo Qoraaga Ugu Fiican Waraaqda Cilmi-baaristaada
Markaad diyaar u tahay inaad qoro warqad cilmi baaris ah, waxaad u baahan tahay inaad hubiso inaad dooratay adeegga saxda ah ee lagu qoro cilmi baaristaada. Waxaad ubaahantahay inaad sameyso wax kabadan kaliya inaad aado iskuul qoris oo aad u ogolaato iskuulka qorida inuu ku barto sida loo qoro waraaqaha cilmi baarista ee gaarka ah; waxaad u baahan tahay inaad doorato adeeg khibrad u leh qorista waraaqaha, sidoo kalena kuu qori kara warqaddaada iyadoo la raacayo tilmaamaha uu dugsigu dejiyay.
Si aad naftaada u siiso fursadda ugu fiican ee helitaanka waraaqaha cilmi-baarista loo qoro waqtigeeda iyo si sax ah, baar shaashad kasta oo ku saabsan waraaqaha cilmi-baarista ee aad la kulanto. Kadib samee wareegyo dhowr ah oo wareysiyo ah shaybaarkooda si aad u hubiso inaysan khaladaad lahayn oo ay asal yihiin. Si aad u xulato qoraa wanaagsan, waxaa muhiim ah inaad weydiiso su'aalo ku saabsan nooca ardayda ay wax u qorayaan, inta sano ee ay si xirfadeysan u shaqeynayeen, nooca mashaariicda ay ka shaqeeyeen, iyo khibradda ay qorayaan. waraaqaha cilmi baarista.
Qaab kale oo loo helo qoraha saxda ah waa inaad qadka ka gasho oo aad aragto waxa ay qorayaasha ugu sareysa qaybta warqadaha cilmi baarista ay qoreen. Waxaad ka heli kartaa shay-baarkooda iyo macluumaadka xiriirkooda adoo adeegsanaya erayga muhiimka ah 'warqad qorista'. Qaar ka mid ah qorayaashani waxay bixiyaan waraaqo muunad ah, haddii aad la xiriirto midkoodna, waxaad si sax ah u ogaan doontaa waxa ay ka qaadaan. Haddii aad lacag siiso qoraa xirfadle ah, waa inaad awood u leedahay inaad sheegto in qiimaha uu caddaalad yahay iyo in kale. Qiime macquul ah waa midka daboolaya dhammaan kharashyada la xiriira qoritaanka warqadda, oo ay ku jiraan lacag macquul ah si aad u hesho tifaftire si uu dib ugu eego warqaddaada.
Waxaad go'aansan kartaa inaad raacdo shirkad bixisa adeeggan. Qiimuhu wuxuu kuxiranyahay nooca adeegyada la bixiyo, sida qorista caadada ah, tafatirka, akhrinta, qaabeynta, iyo daabacaadda. Shirkadaha badankood waxay kuu oggolaanayaan inaad doorato adeegyada aad rabto ka dibna ay ku siiyaan adeegyadan. Waxaa laga yaabaa inaad ka warqabto qaar ka mid ah adeegyadan; tusaale ahaan, waxaad dooran kartaa inta dib u eegis ee warqaddaadu leedahay ka hor inta aan la daabicin. Marka lagu daro xulashada adeegyada la bixiyo, waxaad sidoo kale dooran kartaa inta bog ee aad rabto in warqaddaadu noqoto; adeegyada qaarkood waa kuwo aad u jilicsan oo kuu oggolaanaya inaad daabacdo nuqullo badan.
Waa muhiim in la doorto shirkad ku takhasustay soo saarista waraaqaha cilmi-baarista. In kasta oo shirkadaha qaarkood ay ku takhasusaan qorista waraaqda guud ee cilmi baarista, waxaa jira shirkado kale oo ku takhasusay waraaqaha cilmi baarista tacliinta. Tani waa sababta oo ah waxay leeyihiin faa'iido marka ay timaado helitaanka qoraa sax ah oo ka shaqeeya waraaqahaaga cilmi baarista caadada ah.
Intaad dooranaysid shirkad wax qorta, waxaad u baahan tahay inaad ka taxaddarto inaadan raacin qof ku dallacaya gacan iyo lug adeeggooda. In kasta oo aad rabto inaad hesho xirfadle, waxaad sidoo kale u baahan tahay qiimo wanaagsan. Tusaale ahaan, haddii adeeggaagu kharash kayar bixiyo, waxaa laga yaabaa inaysan fiicnayn in lagu daboolo dhammaan kharashyada ku lug leh. Hubso inaad baarto sumcadda shirkadda, adeegga macaamiisha, iyo waayo-aragnimadooda kahor intaadan iyaga u gaarin.
Ka dib markaad xulato qoraagaaga warqada, waxaa muhiim ah inaad ku hayso liistada macaamiisha aad isticmaali doontid mustaqbalka. Waxaad rabtaa inaad hubiso inay halkaas joogaan haddii aad u baahatid. Waa inay lahaadaan xirfadaha aad u baahan tahay si ay u dhammaystiraan hawshaada oo ay u awoodaan inay ku keenaan natiijooyinka aad rabto wakhti habboon.
Ugu dambeyntiina, had iyo jeer hel qiyaas kahor intaadan ballan-qaadin qoritaanka waraaqahaaga cilmi-baarista. Maaddaama qoraa warqad cilmi baaris qaas ah sameyn karo ama jebin karo warqaddaada, waxaa muhiim ah in horay loo ogaado kharashyada la qiyaasay. iyo inuu la shaqeeyo qoraa caan ah.
Baadhitaan ku samee qorista warqadda
Qor warqaddayda cilmi-baarista
Caawinta warqadda cilmi-baarista
Warqad cilmi baaris ah oo iib ah
Lacag ku bixi warqad cilmi baaris ah
Warqad cilmi baaris khaas ah
Soo iibso warqad cilmi baaris ah
Warqadda cilmi baarista tacliinta
© Copyright 2020 ResearchTogethersomalia.online. All right reserved.
Si looga dhigo boggan mid adiga kugu habboon ResearchTogethersomalia.online isticmaalaa buskudka. Akhriso kaayaga siyaasadda cookie.